It is me. Ko Niknayman.: မလေးရှားနိုင်ငံရှိ နအဖသံရုံးနှင့် စင်ကာပူသံရုံးရှေ့ တို့ တွင် ယနေ့ဆန္ဒပြစဉ်။
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ နအဖသံရုံးနှင့် စင်ကာပူသံရုံးရှေ့ တို့ တွင် ယနေ့ဆန္ဒပြစဉ်။
ိုဆန္ဒပြပွဲဓါတ်ပုံများနှင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အား ဒီပို့ စ်အား အကျယ်ချဲ့ ပြီး ကြည့်နိုင်ပါသည်။
Posted by Ko Niknayman at 11:09 PM